Isbeddel lama filaan oo ku yimid xiisaddii Erdogan iyo Macron | SMC
Home WARARKA MAANTA Isbeddel lama filaan oo ku yimid xiisaddii Erdogan iyo Macron
Isbeddel lama filaan oo ku yimid xiisaddii Erdogan iyo Macron
Madaxweynayaasha Turkey iyo France Recep Tayyip Erdogan iyo Emmanuel Macron ayaa warqado ay is-dhaafsadeen ku ogolaaday inay dib u billaabaan wada-hadallo lagu hagaajinayo xiriirka labada dal, waxaa sidaas shaaca ka qaaday diblomaasiga ugu sarreeya Turkey.
Erdogan ayaa sanadka cusub warqad u qoray Macron isaga oo ka tacsiyeeyey weeraro dhowr ah oo sanadkii tegay ka dhacay France, sida uu wasiirka arrimaha dibedda Turkey Mevlut Cavusoglu u sheegay warbaahinta gudaha.
Macron ayaa toddobaadka kusoo celiyey “warqad aad u wanaagsan” isaga oo ku billaabay “Gacaliye Erdogan” kuna sheegay inuu diyaar u yahay inay wada-kulmaan, ayuu yiri Cavusoglu.
Madaxtooyada Faransiiska ayaa xaqiijisay in labada dhinac ay warqado is-dhaafsadeen, ayada oo aan bixin faah-faahin.
“Waxaan hadda tilmaamo la taaban karo ka aragna Ankara,” ayey tiri madaxtooyada.
Ankara iyo Paris ayaa sanadii tagtay waxay isku qabteen arirmo badan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin dagaallada Syria, Libya iyo gobolka Nagorno-Karabakh ee Azerbaijan.
Midowga Yurub ayaa hadda diyaarinaya liis la ballaariyey oo ay ku jiraan shakhsiyaad Turkish ah oo loo cunaqabateynayo gaaska ay Ankara ka qodeyso badda Meditareeniyaanka, meel u dhow biyaha Qubrus.
Xiisadda labada dal ayaa waxaa wehliyey xifaaltanka shaqsi ee labada hoggaamiye.
Erdogan ayaa sanadkii tegay ku eedeeyey Macron “Islaam naceyb”, isaga oo soo jeediyey in caafimaadka maskaxdiisa la hubiyo, wuxuuna cod-bixiyayaasha France ugu baaqay “inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga takhallusaan Macron.”
Macron ayaa dhankiisana, wuxuu kulankii hogaamiyayaasha Midowga Yurub ka sheegay in Turkey “ay mudan tahay wax ka duwan” siyaasadaha Erdogan.
Previous articleDHAGEYSO: Shariifka “Hubka Inaan Qaadano Diyaar Baan U Nahay”
Next articleDowladda Soomaaliya iyo Mareykanka oo ka wada hadlay dagaalka Al-Shabaab